Vaovao - Baiyun daily chemicals dia nandray anjara tamin'ny Canton Fair faha-129
Ny simika Baiyun isan'andro dia nandray anjara tamin'ny Canton Fair faha-129
Manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 24 aprily dia hotontosaina an-tserasera ny fampirantiana China Import and Export ("Canton Fair" faha-129). Mpampiratiana efa ho 26000, fampirantiana 2.7 tapitrisa mahery ary mpividy avy amin'ny kaontinanta 5 no handray anjara amin'ny foara. Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. dia handray anjara amin'ity Canton Fair ity, hitondra vokatra, savony, savony savony ary detergents misy rano. Karazan-vokatra maro, kalitao tsara, raisin'ireo mpanjifa tsara.
Nanangana ny efitrano fampirantiana an-tserasera amin'ny Canton Fair izahay mba hampisehoana ireo vokatra amin'ny fandefasana mivantana. Mandritra ny Kanton Fair dia hamoaka fampielezam-peo mivantana 8 izahay, amin'ireo vokatra isan-karazany. Vokatra marobe no haseho ao amin'ny efitrano fampielezam-peo, ary ny antsipiriany rehetra momba ny vokatra dia hampahafantarina tsara. Avy eo ianao dia afaka mahita ny vokatra azonay omena, ary ny serivisy azontsika omena.
Tongasoa namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hihaona aminay amin'ny Canton Fair. Amin'izany fotoana izany dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny orinasa izahay, ny fahaizantsika mamokatra, R & D ary ny fahaizan'ny famolavolana. Manantena izahay fa afaka miara-miasa amin'ny namantsika vaovao sy ny sakaizantsika efa ela ary hiara-mivoatra daholo isika rehetra.
Efitra fampirantiana ny Canton Fair: